Nagu saabsan - Eurborn Co., Ltd.
Eurborn waa soosaaraha kaliya ee shiinaha u heellan cilmi baarista, horumarinta iyo soosaarida birta birta ah ee birta ah iyo iftiinka biyaha hoostooda. Si ka duwan alaab-qeybiyeyaasha kale ee sameeya noocyo badan oo laambado ah, waa inaan diiradda saarnaa jawiga adag ee caqabadda ku ah alaabteena awgeed. Alaabtayadu waa inay awoodaan inay qaataan shuruudahan oo ay si fiican u gutaan iyadoon loo eegin caqabadda. Marka waa inaan ku dadaalnaa dadaal kasta oo kasta iyo tallaabo kasta oo aan ku hubin karno wax soo saarkeenna inay ku qanacsan tahay
Waa inaan adkeynaa faahfaahinta. Tartamayaasheena ayaa ah magac caalami ah oo caan ah. Marka waa inaan iswaafajino tayada ugu sareysa alaabtayada heerarkooda. Sikastaba, iskuma waafaqno qiimahooda. Tani waa ballanqaadkeena macaamiisheena, badeecad qiimo sare leh.
Maxaad Us Dooro:
1: Kooxdayada R&D waxay leeyihiin in kabadan 20 sano oo waayo aragnimo ah nalalka qaabdhismeedka banaanka ah. Kajawaabida shuruudaha macaamilkayaga, waxaan si deg deg ah oo wax ku ool ah u dhameystirnaa ODM, Naqshadeynta OEM, waxaanna siineynaa taageero farsamo oo xirfadeed si loo waafajiyo filashooyinka.
2: Waxaan leenahay sameynta caaryada guriga dhexdiisa ah. Maahan sida alaab-qeybiyeyaasha kale ee dibedda ama cid saddexaad.
3: Maya MOQ inta badan dhamaan badeecooyinka birta ah.
4: Waxaan bixinaa qiimayaal warshad toos ah.
5: Waxaan si buuxda ugu hogaansamaynaa heerarka kormeerka tayada caalamiga ah iyo kormeerka masuuliyada bulshada.
6: Waxaan u sameeynaa 100% baaris iyo baaris ku saabsan gabow, IP (biyuhu ma galaan, siigada uma celiyaan) iyo qalab.
7: Waxaan haynaa shahaadooyin wax soo saar patent ah.
8. Waxaan nahay CE, ROHS, ISO9001 shahaado.
2020 waa sanadka ugu adag. Si loo soo celiyo bulshada iyo macaamiisheenna, Eurborn waxay isku daydaa inta ugu wanaagsan ee ay ku caawin karto qof walba. Waxaan ku deeqnay qaddar badan oo khamri caafimaad ah iyo waji-daboolan. Nooc kastoo dhibaato ah, waxaan dooran doonaa inaan adiga kula dagaalamo.